Kitra – «Chan 2018» : notapahin’ny Angoley ny lalan’ny Barea de Madagascar | NewsMada
Kitra – «Chan 2018» : notapahin’ny Angoley ny lalan’ny Barea de Madagascar
Ratsy fiafara ny dian’ny Barea de Madagascar, eo amin’ny fiadiana ny toerana hiatrehana ny ho tompondakan’i Afrika ho an’ny mpilalao tsy matihanina na ny «Chan 2018». Resin’i Angola teo amin’ny dingana farany, mantsy ny malagasy.
Nianjera teo an-tokonam-baravaran’ny «Chan 2018», ny Barea de Madagascar. Lasa avo vao tra-pahoriana. Resin’ny Palancas Negras avy any Angola, tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0 teo amin’ny lalao miverina notanterahina, ny asabotsy lasa teo, tao amin’ny kianja 11 novambra tao Luanda, ny Malagasy.
Hiatrika, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, natokana ho an’ireo mpilalao tsy matihanina na ny «Chan», hotanterahina any Kenya, ny 11 janoary – 2 febroary 2018, izany ny Angoley. Baolina tokana, matin’i Dany, teo amin’ny minitra faha-61 no nahazoan’izy ireo, ny tapakila, hiakarana amin’izany dingan’ny famaranana izany.
Efa nitongilana, tany amin’ny Barea ny vintana, taorian’ny «pénalty», tsy tafiditr’i Job, ho an’ny Angoley, teo amin’ny minitra faha-49. Tsy hain’ny mpilalao malagasy ny nanararaotra izany, izay nahakivy sy nampisavoritaka ny Angoley.
Tsy nampiasa ilay tolotolotra haingam-pandeha intsony, ny Barea fa nanao daka be, fa ho any fa ho any, izay very an-javony sy tsy nisy vokany. Ny Angoley indray aza, no niezaka nandamina ka nanahirana ny fiarovan-tena malagasy. Ankoatra izay, tsy nampiasa ilay fanafihana, fanaony mahazatra i Toby sy Tantely, raha tsy efa tany amin’ny faramparan’ny fotoana.
Saika nanasahala ny isa ny Barea, teo amin’ny 5 minitra farany, saingy nivoaka ny dakan’i Njiva teo amin’ny daka farany. Voadonan’ny vodilaharana Angoley kosa ny an’i Nono. Tapitra hatreo izany ny dian’ny Barea amin’iny «Chan » iny fa ny «Can 2019», indray no andrandraina.